Black ingubo nge collar white - kungcono zabuna elingabuniyo. Ngoba umuntu ihlobenenamanye umfanekiso omncane yesikole othile naveivaet wacabanga yini le ndela, Isigodlo Katolika. Abesifazane abaningi ukuhlobanisa le izinsalela zezimpahla nge romance ezithile, imfihlakalo, imfihlakalo umoya ezizungezile umnikazi wakhe. Yiqiniso, kuyoba nguwe ubani okuthi ngemva kokuba wazama dress black nge collar white, kuncike ngokuyinhloko isitayela sakhe. Eside noma esifushane ke, evulekile noma liyimpumputhe, noma kufaneleka ivulekile, nge okhalweni eliphezulu kakhulu noma eliphansi?
Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde ukuma collar - kungaba coyly-lace, esikhiphekayo, efana umfuziselo zezitsha amantombazane namaSoviet 'encane' noma ngisho frills aluhlaza. Empeleni, ezimweni eziningi, le piece usetha ithoni lonke ngubo. By the way, ukhololo angathengwa ngokwehlukana; ukuthunga amateur angakha kahle ngezandla zaso. Usayizi nesitayela ingafunda khona ngaphandle kokubonisana nomkayo. Into kuphela kufanele sinake: ingubo emnyama ngentambo entanyeni akufanele ngokucebile ahlotshiswa. Darts, emaphaketheni, efekethisiwe, sequins, ruffles - konke kuzoba endaweni. nangezindlela emfushane ibekwe kahle - la are sizana zakho ezihamba phambili. Uma bayakwazi ukubona lo mthetho, wena, yena uzakuvuza obala ukubukeka ithatha nenhle futhi side ngalé (lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi abesifazane abasha, ngubani a ngamakhilogremu ezimbalwa kuvimbela ubuthongo ebusuku).
Kusukela yini okufanele uyigqoke?
Njengoba kuphawulwe ngenhla, ingubo black nge collar white kungaba beat ezahlukene ngosizo izesekeli. Ngokwesibonelo, bamqhubela tights amnyama futhi omnyama njengoba amabhuzu, uba bohemian isitayela isithonjana, futhi ungakwazi ngokuphepha ukuya kuvulwa i gallery yobuciko noma umbukiso, bese eya restaurant. Uma dress yakho ifakwe izinto ezinemikhono emide nobude ifinyelela kwedolo, ukugqoka ngesibindi ke ukusebenza ngokuhlanganyela enkantolo izicathulo zikanokusho nomgexo pearl. Wena ungacabanga ukuthi lesi sithombe unesicefe khulu futhi esiqinile? Khona-ke "alulaze" esikhwameni imigexo yayo kukhanya noma garish ezinkulu. Excellent liyozibukela ebumnyameni Indwangu ngezandla esiliva ibhroshi.
Shoes, amabhande, amagilavu
Black ingubo nge collar white usesemuhle futhi iqiniso ukuthi kungenziwa igqoke nge cishe kunoma iyiphi izicathulo. Beka kuye ballerinas - futhi lapha wena intokazi lady Lightfoot; obomvu High Heels - a seductress ebulalayo, jockey amabhuzu - connoisseur of yemfashini amabhuzu emsamo - ephathini intombazane kumnandi. By the way, ukwengeza ephelele ukuze dress kusihlwa - amagilavu. Kungenzeka esifushane, kancane isikhathi eside kunaleso esihlakaleni, futhi isikhathi eside, lathinta indololwane. Uma ungabaza, sibheke izithombe Hollywood abadlali kwekhulu elidlule - akuvamile uvele umphakathi ngaphandle amagilavu, ngisho obugagu, umuzwa isitayela kanye ukuzethemba babengeke ubamba. Esinye sezici ezivelele kungaba wayibhinca - emincane noma ububanzi. Njengomthetho, umbala walo kufanele ihluke base. Uma isimo sivuma, khetha imibala egqamile - obomvu, ayibe, Emerald oluhlaza, fuchsia. Zonke izincomo ezihlongozwayo ingakwazi labo amantombazane obubusa iKhabhinethi is languishing ingubo emhlophe nge collar abamnyama.
Khetha izingubo ebusika okuzingela
Indlela ukuhlukanisa real "ukuguqulwa" ovela inkohliso - amathiphu
Moccasins abafana - ubuhle noma ezintweni ezikwenza unethezeke?
Yikuphi bamba ukukhetha?
Lakedra (inhlanzi): incazelo, zokupheka
Tattoos "ukugwinya": asho ukuthini futhi lapho eyayigcwele?
Diana Garkusha, finalist emncintiswaneni "Miss Universe - 2014"